Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l1013 lah
Mamboly betsaka nefa mijinja kely
Alahady 02 Jona
Vakio ny Hagay 1:1–11. Inona no nitranga teto, ary zava-dehibe mihoatra noho izany, inona no antony nahatonga izany hitranga? Mbola zava-dehibe lavitra noho izany, mety mbola hiseho amintsika ankehitriny koa io fitsipika io. Amin’ny fomba ahoana? Amin’ny fomba ahoana no mety hahameloka antsika koa noho isika manao zavatra toy izany?
“Natsahatra mandritra ny herintaona mahery ny asa ary saika nilaozana mihitsy aza. Nijanona tany an-tranony ny olona ary nanao izay tratran’ny ainy hahazoan-karena izy. Nampalahelo anefa ny toerana nisy azy ireo, fa na dia teo aza ny asa nataony, dia tsy nambinina izy ireo. Toa niray tetika hanohitra azy avokoa na dia ny zavaboary aza: nandevona ny vokatra nananany ny haintany. Voankazo naniry ho azy sy ireo nambolena, toy ny varimbazaha, divay sy diloilo, no nomen’Andriamanitra azy ho vavolombelon’ny fitiavany. Kanefa noho izy ireo nampiasa ireny fanomezana nomena malalaka ireny tamin’ny fomba feno fitiavan-tena, dia nesorina taminy ny fitahiany.” — MM, tt. 465,466.
Nabaribarin’i Hagay teo anatrehan’ny vahoaka ny toe-javatra niainan’izy ireo. Ny tsy fahombiazana eo amin’ny asa no anankiray amin’ireo ozona vokatry ny tsy fanajana ny fifanekena tamin’ Andriamanitra (Lev. 26:16,20). Tsy hisy mihitsy ny fanambinana ho azy ireo raha tsy mampitodika ny sainy any amin’io laharam-pahamehana io izy.
Nanana zotom-po lehibe ho an’ny tempolin’i Jehôvah i Hagay ka tiany hamita avy hatrany ny fananganana azy indray ny vahoaka. Nifanohitra tamin’ny fahafaham-pon’ireo izay tsy nihevitra ny tempoly fa nihevitra kosa ny fiadanany manokana ny faniriana lalina tao anatin’i Hagay. Raha ny tempoly no tena nanahiran-tsaina an’i Hagay, ny tranon’izy ireo manokana kosa no tena nahaliana indrindra ny vahoaka.
Nampiasain’i Jehôvah i Hagay hanetsiketsika ny fon’ny olona hitodika amin’ny raharaha manahirana ny sain’Andriamanitra. Tsy nomem-boninahitra araka ny tokony ho izy Andriamanitra raha mbola rava koa ny tranony. Ny tempoly tao Jerosalema dia naneho ara-tandindona fa eo anivon’ny taranak’olombelona lavo Andriamanitra. Fampahatsiahivana hita maso ho an’izao tontolo izao izany fa ny Tompo Mpanjaka no Andriamanitry ny lanitra sy ny tany. Ahoana moa no hahafahan’ny Zanak’Isiraely mijoro ho vavolombelon’Ilay tena Andriamanitra marina kanefa rava ilay fanehoana izany Andriamanitra izany aza (jer. ny Jao. 2:19; Mat. 26:31) sy ny drafi-pamonjena iray manontolo? Amin’ny lafiny maro, ny fihetsik’izy ireo nanoloana ny tempoly dia nampiseho olana ara-panahy lalindalina kokoa, dia ny tsy fahatsapan’izy ireo intsony ny iraka nampanaovin’ Andriamanitra azy amin’ny maha-vahoakan’Andriamanitra sisa azy ireo.
Misy fampitandremana ho antsika hitanao ve eto?